बट्टाईको अण्डा खाने गर्नुभएको छ ? यस्तो नसोचेको परिवर्तन आउँदै छ हजुरको शरीरमा खाने विधी अवश्य जान्नुहोला – Jagaran Nepal
बट्टाईको अण्डा खाने गर्नुभएको छ ? यस्तो नसोचेको परिवर्तन आउँदै छ हजुरको शरीरमा खाने विधी अवश्य जान्नुहोला
नेपालमा बट्टाई पालन निकै फस्टाएको छ। बट्टाईको अन्डा र मासुलाई पौष्टिक खाद्य पदार्थ मानिन्छ ।यसको मासुभन्दा पनि अन्डा निकै स्वास्थ्यबर्धक हुने विज्ञहरुको भनाइ छ। बट्टाईको अन्डा स्वास्थ्यका हिसाबले बच्चादेखि वृद्धसम्मलाई फाइदाजनक खुराक मानिन्छ ।
अन्नपूर्ण डेली बाट